ओली, दाहाल र देउवाको आर्शिवाद पाए वामदेवलाई हराइदिने मुकुन्द घिमिरेको घोषणा!, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
ओली, दाहाल र देउवाको आर्शिवाद पाए वामदेवलाई हराइदिने मुकुन्द घिमिरेको घोषणा!
काठमाडौँ । काठमाडौंको क्षेत्र नं ७ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रामवीर मानन्धरले आफ्नै पार्टीका नेता वामदेव गौतमको लागि भनेर सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
मङ्गलबारनै उनले पार्टी सचिवालयमा राजीनामा बुझाएपछि नेता गौतम सांसदको उम्मेदवार बन्ने विषयले निकै चर्चा पाएको छ। गत वर्ष सम्पन्न आम निर्वाचनमा बर्दिया १ बाट पराजित भएका गौतमलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउनकै लागि मानन्धरलाई राजीनामा दिन किन लगाइयो यो रहस्यमय विषय छ।
मन्त्री र सकेसम्म प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि मानन्धरलाई राजिनामा गराएर गौतमलाई उम्मेद्वार बनाइएको जानकारहरू बताउँछन्। नेकपाका नेता गौतम गत निर्वाचनमा बर्दिया १ बाट काङ्ग्रेसका सञ्जयकुमार गौतमसँग ७५३ मतले पराजित भएका थिए।
सामाजिक सञ्जालदेखि चियापसलमा समेत वामदेवलाई उम्मेद्वार बनाउनकै लागि मानन्धरलाई राजीनामा गराउन लागेको भन्दै आलोचना भएको छ।
कतिपय प्रयोगकर्ताले लेखेका छन् , 'जनमतको कदर हुन्थ्यो भने किन वामदेवलाई बनाइनुपर्ने'। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाएका मुकुन्द घिमिरेले त झन् गहिरो व्यङ्ग गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेका छन्। राजनीतिमा जे पनि हुन्छ भन्ने सन्दर्भले लाई उनले इंगित गर्न खोजेका छन्।